मानिस व्यस्त हुँदा पनि चिन्ता गर्छ अनि फुर्सदमा पनि चिन्तै लिन्छ । बन्दाबन्दीपूर्व मानिसहरूमा सधैँजसो व्यस्तताको भारी थियो । अधैर्यताका कारण तनावको ज्वाला उठ्थ्यो जुन कुरा अफिसदेखि घरसम्म बोकेर ल्याउँथ्यो अनि घरलाई समेत अशान्तै बनाउँथ्यो । तर, यो सङ्कट त अवश्य सुधार हुने नै छ, हुन्छ पनि र हुनुपर्छ नै । सबैजसोलाई थाहा छ : यो केवल मानिसका कारणले नियन्त्रण हुन्छ र मानिसकै कारणले बढ्छ पनि । अनुशासनको दायराभित्र रहने एउटै नियमका सारभित्र ।सायद यो संसारको आजको परिस्थिति सुधार भएपछि मानिसले हिजोकै जसरी उही अशान्तिलाई दिमागमा बोझिलो बनाएर बोक्नेछ । सायद उसैगरी यान्त्रिक जीवनको दलदलमा भासिनेछ । सायद उसैगरी भ्रष्टाचार, अत्याचार, लुट, कचिङ्गल गरिरहनेछ । विशेष गरेर मानिसले समस्याको समाधान खोज्नलाई भन्दा तनावलाई बोक्ने अभ्यास गर्छ । काम गर्ने स्थानका पीडालाई बोकेर पारिवारिक सद्भावमा ह्रास तुल्याउँछ । तब मानिसले एउटा चिन्ताले अर्को चिन्तालाई जन्माउँछ । अनि, सम्पर्कमा रहेकालाई पनि अशान्त तुल्याउँछ । यसर्थ संसार यही वास्तविकताभित्र व्यस्ततामा त झनै चिन्तैमा रहन्छ ।ठूला–ठूला प्रगतिको दम्भ गर्नेहरू पनि आज प्रगति गर्न नसकेका सरह जसरी नै चिन्तित छन् । विश्व महामारीको भयावह रूपले संसारको सोचमा परिवर्तन गर्ला त ! आखिर चिन्ताले, व्यथाले, समस्याले अर्थात् सुख, आनन्द, खुसीले पनि धनलाई, भौतिक सम्पन्नतालाई छोडेर केवल मानिसलाई प्रभावित पार्ने रहेछ । सायद मानवीय गुणको स्वभाव चिन्ता होइन चिन्तन हो । किनकि, चिन्ताले चिताको बाटोतिर धकेल्छ अनि चिन्तनले ज्ञानलाई बढाउँछ । बन्दाबन्दीका कारण अहिले यातायातका साधन चलेका छैनन् । अन्यथा अर्थ नलागोस्, बन्दाबन्दीपछि जति सडक दुर्घटनाका कारणबाट आजसम्ममा मान्छेको ज्यान जान्थ्यो होला त्यति त कोरोनाले मारेको छैन । बरु धेरैको ज्यान जोगिएको पनि छ । यसर्थ आवश्यकताभन्दा बढी हाम्रो यान्त्रिक लालसाका कारणले प्राण जाने रहेछ भन्न पनि त सकिन्छ नि ।विद्वत् वर्गहरू, सिर्जनामा रम्न चाहनेहरू, साहित्यका पारखीहरू अध्ययन तथा लेखनमा व्यस्त छन् । धेरैलाई त यो फुर्सद वरदान नै हो । मानौँ यो साधना गर्ने सुअवसर हो । ठूला–ठूला वैज्ञानिकहरू सधैँजसो बन्दाबन्दीमा नै कोठाभित्र सिर्जनशीलका बन्दा हुनन् । अलिकति व्यवस्थित रहन सक्नेका लागि यो समस्या होइन अवसर साबित हुँदो हो । अप्ठ्यारामा हुनेका लागि अभिशाप पनि । अर्थात्, विपन्नका आर्तनाद र आलापलाई बिर्सन मिल्दैन । अनेकौँ हन्डर बेहोर्दै सीमाक्षेत्रमा आइपुगेर मातृभूमिको सुगन्ध लिन चाहँदा भारतीय भूमिमै बस्नुपर्ने विवस नेपालीदेखि परदेशको एउटा ठूलो बिल्डिङमा कुनै पनि हरियोवस्तु देख्न नपाएकाहरूको आर्तनाद टीठलाग्दो हुन्छ । बिहान बेलुका के खाने भन्ने चिन्ताले सताइएका लाखौँ नेपालीका दर्द हृदयविदारक छन् । जे–जसो भने पनि धेरैले काम नगरेको समयमा तलबै खान पाएका छैनन् र तलब दिनेलाई पनि कतिपय अवस्थामा समस्या हुन सक्छ । तर, अप्ठ्यारोमा सहयोगी बन्ने हो भने मानवीय न्याय गर्नुपर्छ ।वास्तवमा देहान्तभन्दा एकान्त उत्तम हो । एकातिर बन्दाबन्दी केही खुकुलो भयो अर्कातिर महामारीले चरम रूप लिइरहेको छ । यो गम्भिर जटिलताको विषय हो । न त सरकारले बन्दाबन्दी बढाउन सक्छ । उता जनताको खल्ती रित्तिइसक्यो । यसर्थ यो समय सिर्जनशील कर्मलाई, खेतीपाती हुनेले खेतीको नयाँपनलाई जोड दिने समय बन्न सक्नुपर्छ । व्यापारका लागि अनिवार्य आवश्यकताका चीजबीजहरू, छिमेकी मुलुक भारतबाट दैनिक आयात गरिरहनु पर्ने अत्यावश्यकीय चीजलाई अब आफैं उत्पादन गर्ने गरी राज्यले कदम चाल्नुपर्छ ।एकान्त अवस्थाको मर्मके मान्छे फुर्सद भएका कारणले दुःख मान्दै छ ? ठूला–ठूला आविष्कारक, दार्शनिक, ऋषि, महन्तले आखिर एकान्तमा बसेर सिद्धहस्तता कायम गर्ने रहेछन् । हाम्रो भूमि नै मानौँ एकान्तवासप्रेमी थियो । प्रकृतिप्रदत्त थियो । ज्ञानको विकास सायद एकान्तभित्रै सम्भव देखेर पनि हुनुपर्छ । यसर्थ एकान्तवास पट्यारलाग्दो होइन रहरलाग्दो पनि त हुने रहेछ । त्यसो भए मानिसको चाहना व्यस्तता हो कि फुर्सदमा रहने हो त ? मानिस व्यस्त हुँदा फुर्सद भएन भन्छ अनि फुर्सद हुँदा व्यस्ततालाई उचित ठान्छ । फुर्सदलाई शून्य समय मान्छ । कर्मशील हुन पनि चाहन्छ तर जब व्यस्त हुन्छ तब चिन्ताको रागलाई बोकेर रातोदिन तड्पिन्छ । त्यसो हो भने मानिसको चाहना के हो ?मानिसले खोजेको कुरा वास्तवमा ‘स्वतन्त्रता’ नै हो । मानिस पिँजडाभित्र बसेर पनि आफ्नो चाहना भन्दा पर बन्धित हुन्छ भने तब बेखुसी हुने रहेछ । त्यसो हो भने मानिसलाई काम नपाएकाले चिन्ता भएको होइन । स्वतन्त्रताको अभाव भएको रहेछ । स्वतन्त्रतालाई खोस्ने उसको चाहना रहेछ । उसको चाहनालाई संसारले बनाइदिएको नियमले निर्देशित गर्ने रहेछ । त्यसैले यो संसारमा मानिसले नै पैसा छाप्छ, मानिस नै धनी र गरिब छन् । गरिबी पनि बुद्धिमान भनिएको मानिसकै व्यवस्थाभित्रको सबैभन्दा ठूलो मूर्ख पद्धति हो । किनकि, यो प्रकृतिले कसैलाई गरिब बनाएर जन्माउँदैन । सबैलाई पुग्ने अन्न, पानी, फलफूल उब्जाएको छ । कति मीठा फलफूल यस धर्तीमा हाम्रा लागि उब्जिएका छन् । तर, हामी विपरीत सोच बोकेर झिना विषयमा आपसमा वैरभाव गरिरहेका छौँ । शक्तिशाली भनाउँदाले अमानवीय हर्कत जमाउने सोचका कारण संसारमा यो विभेदै विभेदको महाभयङ्कर विषाणु व्याप्त छ र वर्षौँदेखि यो चलिरहेको छ । असमान वितरणमा धर्तीलाई कब्जामा लिएर क्षमताको दुरुपयोग गरेकाले एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई मानिसको व्यवहार गर्दैन । स्वार्थी बन्ने अभ्यास गरिरहन्छ ।हाम्रो प्रकृति सुखको खोजीमा हरपल चिन्तित हुने रहेछ अनि सुखको परिभाषा दुनियाँले बनाइदिएको व्यवस्था र भौतिक उन्नतितिरको भएछ । वास्तवमा दुनियाँको सुखको परिभाषाभित्र गाँसिएको भौतिक आल्हाद त सधैँ वास्तविकताभन्दा टाढा हुने रहेछ । त्यसैले धनी मानिस पनि दुःखी हुने रहेछन् । सुनको ओछ्यानमा सुत्ने, सुनकै रिकापीमा भोजन ज्युनार गर्नेलाई पनि अशान्तिको ज्वालाले प्रहार गर्ने रहेछ । तब मानिसले शान्तिको खोजीमा बुद्धलाई सम्झने रहेछ । शान्तिका लागि आध्यात्मिक मार्गतिरको बाटोलाई उत्तम विकल्प मान्ने रहेछ । तर, आध्यात्मिक मार्गहरूले पनि आफ्ना नियम–विनियमभित्र धकेल्दा यथार्थभन्दा कसैले कल्पना, कसैले शारीरिक कुरा, कसैले भित्री कुरा गरे पनि चाहनाकै र असन्तुष्ट मनको तर्कनालाई एकछिन भुल्याउने उपायसँग कतै न कतै मानिसलाई एकाङ्की र एकाङ्गी सोचको कोठरीमा हालिदिने रहेछ । तर, वास्तवमा मानिसको चाहना के हो ?असन्तुष्टि के हो ?मानिस चाहनाका अनगिन्ती पोकालाई भिरेर असन्तुष्ट हुने रहेछ । जे छ त्यसमा कहिल्यै स्वीकार गर्दैन । त्यसको मजा लिँदैन । जे छैन त्यसमा अर्काको हेरेर चाहनाका चाङ बनाउँछ अनि मानिस स्वार्थी हुन्छ । तब मानिस संसारकै सबैभन्दा दुःखी प्राणी साबित हुन्छ । अर्काको सिको गर्ने चाहना नै सबैभन्दा बढी दुःखी बनाउने कारण रहेछ । तब तिनै चाहनाको परिपूर्ती गर्न भन्दै मानिस रातोदिन चिन्तामा हुन्छ । अनि मानिसलाई चाहिन्छ : सम्मान । मानिस सम्मानको र सम्पत्तिको लक्ष्य बोकेर श्रम त गर्छ तर सधैँ अशान्त हुन्छ । तर, मानिसले नै नर्क बनाएको यो धर्तीमा उसले चाहेको खण्डमा हरपल स्वर्ग बन्ने रहेछ अनि यहाँका हरेक मानिस देवता पनि बन्न सक्ने रहेछन् ।अन्ततः संसारलाई कोरोना भाइरसले हाम्रा पूर्वजले सिकाएका संस्कृतिभित्रको यथार्थताको पाठ पढ्न पनि प्रेरित नगरेको होइन । मानिसलाई आफ्नो प्राकृतिक धरातल खोज्न सिकाएको पनि हो । अर्थात् अनुशासनको दायरालाई कायम राख्न सिकाएको हो । सहरिया कोलाहल, भिडभाड होइन शान्त, सुरम्य र सभ्य स्वस्थ जीवन जिउने मानवीय आधारभूमिलाई दर्शाएको हो । त्यस अर्थमा त संसारलाई एउटै सन्देश दिएको हो भन्न सकिन्छ । बूढापाकाहरू दिनभरि घरमा बसेका हुन्थे । बेलुका केही कुरा भन्दा गनगन गरेको जस्तो लाग्थ्यो । अब हामी महसुस गरौँ– तिनको आवाजमा मनोवैज्ञानिक असर रहेछ किनकि आज हामी घरमा बसिरहँदा दिक्क मान्दै छौँ नि त । बन्दाबन्दी खुकुलो भयो भनेर यदि हामी यो महामारीबाट डराएनौँ भने तब हामी बहादुर मानिस हुन सक्दैनौँ । सरकारलाई बाध्यता छ अनि हामी मुर्ख नबनौँ । ‘एकान्तवास’ (क्वारेन्टाइन) बाट भाग्नु महामूर्खता हो । हामी यति धेरै अबुझ नबनौँ । कमसेकम आफूलाई सङ्क्रमण भयो भने अरूलाई नसरोस् भनेर सहयोग गरौँ । यो सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो । रोग लागेर पछुताउनुभन्दा रोग लाग्नै नदिने उपाय अपनाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पनि हो ।सारा संसारलाई एउटै नियमको घेरामा रोखेर बाँध्ने सानो विषाणुका विषयमा चिन्तन गरेर जीवन पनि पढौँ । यसले संसारलाई फुर्सदको रहस्यलाई बताउँदैछ । शहरिया भिडभाड छोडेर मानिसलाई आफ्नै प्रकृतिको रम्यता सिकाउँदै छ । कोलाहल र अशान्तिको ज्वालाबाट अलिकति कोल्टिएर सभ्यता र सुरम्यतामा स्वस्थतालाई अपनाउन सिकाउँदै छ । आफैंमा यो भाइरस सधैँ जीवित रहिरहँदैन भने अरूमा परजीवी हुने एउटा विषाणु एकजनाबाट सयौँसम्म, सयौँबाट हजारौँसम्म हुँदै आज संसारभर जहाज चढेर, गाडी चढेर रगरग बन्दै प्रलय मच्चाइरहेको छ । तब मानिसलाई फुर्सदिलो एउटै नियमको दायरा बनाएर आफू आफैं सचेत हुने र स्वतन्त्रताको आभास हुने वास्तविक प्रकृतिलाई सिकाउँदै छ । अलिकति संसारको प्रदूषणको वितण्डामा स्वस्थता प्रदान गर्ने अभिष्ट प्रकृतिको हुँदो हो । आणविक बमदेखि विज्ञानको आविष्कारका दम्भ गरिरहँदा सायद प्रकृतिभन्दा मानिस ठूलो हुँदैन भन्ने सन्देश प्रदान गरिरहेको हुँदो हो । अर्थात्, मानिसलाई फुर्सदको अर्थलाई प्रकृतिसँग गाँसेर हेर्नलाई भनेको हुँदो हो ।[email protected](लेखक समसामयिक सन्दर्भका साथै भाषा र साहित्यका विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।)
८ असार २०७७, सोमबार १२:११
मानिस व्यस्त हुँदा पनि चिन्ता गर्छ अनि फुर्सदमा पनि चिन्तै लिन्छ । बन्दाबन्दीपूर्व मानिसहरूमा सधैँजसो व्यस्तताको भारी थियो । अधैर्यताका कारण तनावको ज्वाला उठ्थ्यो जुन कुरा अफिसदेखि घरसम्म बोकेर ल्याउँथ्यो अनि घरलाई समेत अशान्तै बनाउँथ्यो । तर, यो सङ्कट त अवश्य सुधार हुने नै छ, हुन्छ पनि र हुनुपर्छ नै । सबैजसोलाई थाहा छ : यो केवल मानिसका कारणले नियन्त्रण हुन्छ र मानिसकै कारणले बढ्छ पनि । अनुशासनको दायराभित्र रहने एउटै नियमका सारभित्र ।
सायद यो संसारको आजको परिस्थिति सुधार भएपछि मानिसले हिजोकै जसरी उही अशान्तिलाई दिमागमा बोझिलो बनाएर बोक्नेछ । सायद उसैगरी यान्त्रिक जीवनको दलदलमा भासिनेछ । सायद उसैगरी भ्रष्टाचार, अत्याचार, लुट, कचिङ्गल गरिरहनेछ । विशेष गरेर मानिसले समस्याको समाधान खोज्नलाई भन्दा तनावलाई बोक्ने अभ्यास गर्छ । काम गर्ने स्थानका पीडालाई बोकेर पारिवारिक सद्भावमा ह्रास तुल्याउँछ । तब मानिसले एउटा चिन्ताले अर्को चिन्तालाई जन्माउँछ । अनि, सम्पर्कमा रहेकालाई पनि अशान्त तुल्याउँछ । यसर्थ संसार यही वास्तविकताभित्र व्यस्ततामा त झनै चिन्तैमा रहन्छ ।
ठूला–ठूला प्रगतिको दम्भ गर्नेहरू पनि आज प्रगति गर्न नसकेका सरह जसरी नै चिन्तित छन् । विश्व महामारीको भयावह रूपले संसारको सोचमा परिवर्तन गर्ला त ! आखिर चिन्ताले, व्यथाले, समस्याले अर्थात् सुख, आनन्द, खुसीले पनि धनलाई, भौतिक सम्पन्नतालाई छोडेर केवल मानिसलाई प्रभावित पार्ने रहेछ । सायद मानवीय गुणको स्वभाव चिन्ता होइन चिन्तन हो । किनकि, चिन्ताले चिताको बाटोतिर धकेल्छ अनि चिन्तनले ज्ञानलाई बढाउँछ । बन्दाबन्दीका कारण अहिले यातायातका साधन चलेका छैनन् । अन्यथा अर्थ नलागोस्, बन्दाबन्दीपछि जति सडक दुर्घटनाका कारणबाट आजसम्ममा मान्छेको ज्यान जान्थ्यो होला त्यति त कोरोनाले मारेको छैन । बरु धेरैको ज्यान जोगिएको पनि छ । यसर्थ आवश्यकताभन्दा बढी हाम्रो यान्त्रिक लालसाका कारणले प्राण जाने रहेछ भन्न पनि त सकिन्छ नि ।
विद्वत् वर्गहरू, सिर्जनामा रम्न चाहनेहरू, साहित्यका पारखीहरू अध्ययन तथा लेखनमा व्यस्त छन् । धेरैलाई त यो फुर्सद वरदान नै हो । मानौँ यो साधना गर्ने सुअवसर हो । ठूला–ठूला वैज्ञानिकहरू सधैँजसो बन्दाबन्दीमा नै कोठाभित्र सिर्जनशीलका बन्दा हुनन् । अलिकति व्यवस्थित रहन सक्नेका लागि यो समस्या होइन अवसर साबित हुँदो हो । अप्ठ्यारामा हुनेका लागि अभिशाप पनि । अर्थात्, विपन्नका आर्तनाद र आलापलाई बिर्सन मिल्दैन । अनेकौँ हन्डर बेहोर्दै सीमाक्षेत्रमा आइपुगेर मातृभूमिको सुगन्ध लिन चाहँदा भारतीय भूमिमै बस्नुपर्ने विवस नेपालीदेखि परदेशको एउटा ठूलो बिल्डिङमा कुनै पनि हरियोवस्तु देख्न नपाएकाहरूको आर्तनाद टीठलाग्दो हुन्छ । बिहान बेलुका के खाने भन्ने चिन्ताले सताइएका लाखौँ नेपालीका दर्द हृदयविदारक छन् । जे–जसो भने पनि धेरैले काम नगरेको समयमा तलबै खान पाएका छैनन् र तलब दिनेलाई पनि कतिपय अवस्थामा समस्या हुन सक्छ । तर, अप्ठ्यारोमा सहयोगी बन्ने हो भने मानवीय न्याय गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा देहान्तभन्दा एकान्त उत्तम हो । एकातिर बन्दाबन्दी केही खुकुलो भयो अर्कातिर महामारीले चरम रूप लिइरहेको छ । यो गम्भिर जटिलताको विषय हो । न त सरकारले बन्दाबन्दी बढाउन सक्छ । उता जनताको खल्ती रित्तिइसक्यो । यसर्थ यो समय सिर्जनशील कर्मलाई, खेतीपाती हुनेले खेतीको नयाँपनलाई जोड दिने समय बन्न सक्नुपर्छ । व्यापारका लागि अनिवार्य आवश्यकताका चीजबीजहरू, छिमेकी मुलुक भारतबाट दैनिक आयात गरिरहनु पर्ने अत्यावश्यकीय चीजलाई अब आफैं उत्पादन गर्ने गरी राज्यले कदम चाल्नुपर्छ ।
एकान्त अवस्थाको मर्म
के मान्छे फुर्सद भएका कारणले दुःख मान्दै छ ? ठूला–ठूला आविष्कारक, दार्शनिक, ऋषि, महन्तले आखिर एकान्तमा बसेर सिद्धहस्तता कायम गर्ने रहेछन् । हाम्रो भूमि नै मानौँ एकान्तवासप्रेमी थियो । प्रकृतिप्रदत्त थियो । ज्ञानको विकास सायद एकान्तभित्रै सम्भव देखेर पनि हुनुपर्छ । यसर्थ एकान्तवास पट्यारलाग्दो होइन रहरलाग्दो पनि त हुने रहेछ । त्यसो भए मानिसको चाहना व्यस्तता हो कि फुर्सदमा रहने हो त ? मानिस व्यस्त हुँदा फुर्सद भएन भन्छ अनि फुर्सद हुँदा व्यस्ततालाई उचित ठान्छ । फुर्सदलाई शून्य समय मान्छ । कर्मशील हुन पनि चाहन्छ तर जब व्यस्त हुन्छ तब चिन्ताको रागलाई बोकेर रातोदिन तड्पिन्छ । त्यसो हो भने मानिसको चाहना के हो ?
मानिसले खोजेको कुरा वास्तवमा ‘स्वतन्त्रता’ नै हो । मानिस पिँजडाभित्र बसेर पनि आफ्नो चाहना भन्दा पर बन्धित हुन्छ भने तब बेखुसी हुने रहेछ । त्यसो हो भने मानिसलाई काम नपाएकाले चिन्ता भएको होइन । स्वतन्त्रताको अभाव भएको रहेछ । स्वतन्त्रतालाई खोस्ने उसको चाहना रहेछ । उसको चाहनालाई संसारले बनाइदिएको नियमले निर्देशित गर्ने रहेछ । त्यसैले यो संसारमा मानिसले नै पैसा छाप्छ, मानिस नै धनी र गरिब छन् । गरिबी पनि बुद्धिमान भनिएको मानिसकै व्यवस्थाभित्रको सबैभन्दा ठूलो मूर्ख पद्धति हो । किनकि, यो प्रकृतिले कसैलाई गरिब बनाएर जन्माउँदैन । सबैलाई पुग्ने अन्न, पानी, फलफूल उब्जाएको छ । कति मीठा फलफूल यस धर्तीमा हाम्रा लागि उब्जिएका छन् । तर, हामी विपरीत सोच बोकेर झिना विषयमा आपसमा वैरभाव गरिरहेका छौँ । शक्तिशाली भनाउँदाले अमानवीय हर्कत जमाउने सोचका कारण संसारमा यो विभेदै विभेदको महाभयङ्कर विषाणु व्याप्त छ र वर्षौँदेखि यो चलिरहेको छ । असमान वितरणमा धर्तीलाई कब्जामा लिएर क्षमताको दुरुपयोग गरेकाले एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई मानिसको व्यवहार गर्दैन । स्वार्थी बन्ने अभ्यास गरिरहन्छ ।
हाम्रो प्रकृति सुखको खोजीमा हरपल चिन्तित हुने रहेछ अनि सुखको परिभाषा दुनियाँले बनाइदिएको व्यवस्था र भौतिक उन्नतितिरको भएछ । वास्तवमा दुनियाँको सुखको परिभाषाभित्र गाँसिएको भौतिक आल्हाद त सधैँ वास्तविकताभन्दा टाढा हुने रहेछ । त्यसैले धनी मानिस पनि दुःखी हुने रहेछन् । सुनको ओछ्यानमा सुत्ने, सुनकै रिकापीमा भोजन ज्युनार गर्नेलाई पनि अशान्तिको ज्वालाले प्रहार गर्ने रहेछ । तब मानिसले शान्तिको खोजीमा बुद्धलाई सम्झने रहेछ । शान्तिका लागि आध्यात्मिक मार्गतिरको बाटोलाई उत्तम विकल्प मान्ने रहेछ । तर, आध्यात्मिक मार्गहरूले पनि आफ्ना नियम–विनियमभित्र धकेल्दा यथार्थभन्दा कसैले कल्पना, कसैले शारीरिक कुरा, कसैले भित्री कुरा गरे पनि चाहनाकै र असन्तुष्ट मनको तर्कनालाई एकछिन भुल्याउने उपायसँग कतै न कतै मानिसलाई एकाङ्की र एकाङ्गी सोचको कोठरीमा हालिदिने रहेछ । तर, वास्तवमा मानिसको चाहना के हो ?
असन्तुष्टि के हो ?
मानिस चाहनाका अनगिन्ती पोकालाई भिरेर असन्तुष्ट हुने रहेछ । जे छ त्यसमा कहिल्यै स्वीकार गर्दैन । त्यसको मजा लिँदैन । जे छैन त्यसमा अर्काको हेरेर चाहनाका चाङ बनाउँछ अनि मानिस स्वार्थी हुन्छ । तब मानिस संसारकै सबैभन्दा दुःखी प्राणी साबित हुन्छ । अर्काको सिको गर्ने चाहना नै सबैभन्दा बढी दुःखी बनाउने कारण रहेछ । तब तिनै चाहनाको परिपूर्ती गर्न भन्दै मानिस रातोदिन चिन्तामा हुन्छ । अनि मानिसलाई चाहिन्छ : सम्मान । मानिस सम्मानको र सम्पत्तिको लक्ष्य बोकेर श्रम त गर्छ तर सधैँ अशान्त हुन्छ । तर, मानिसले नै नर्क बनाएको यो धर्तीमा उसले चाहेको खण्डमा हरपल स्वर्ग बन्ने रहेछ अनि यहाँका हरेक मानिस देवता पनि बन्न सक्ने रहेछन् ।
अन्ततः संसारलाई कोरोना भाइरसले हाम्रा पूर्वजले सिकाएका संस्कृतिभित्रको यथार्थताको पाठ पढ्न पनि प्रेरित नगरेको होइन । मानिसलाई आफ्नो प्राकृतिक धरातल खोज्न सिकाएको पनि हो । अर्थात् अनुशासनको दायरालाई कायम राख्न सिकाएको हो । सहरिया कोलाहल, भिडभाड होइन शान्त, सुरम्य र सभ्य स्वस्थ जीवन जिउने मानवीय आधारभूमिलाई दर्शाएको हो । त्यस अर्थमा त संसारलाई एउटै सन्देश दिएको हो भन्न सकिन्छ । बूढापाकाहरू दिनभरि घरमा बसेका हुन्थे । बेलुका केही कुरा भन्दा गनगन गरेको जस्तो लाग्थ्यो । अब हामी महसुस गरौँ– तिनको आवाजमा मनोवैज्ञानिक असर रहेछ किनकि आज हामी घरमा बसिरहँदा दिक्क मान्दै छौँ नि त । बन्दाबन्दी खुकुलो भयो भनेर यदि हामी यो महामारीबाट डराएनौँ भने तब हामी बहादुर मानिस हुन सक्दैनौँ । सरकारलाई बाध्यता छ अनि हामी मुर्ख नबनौँ । ‘एकान्तवास’ (क्वारेन्टाइन) बाट भाग्नु महामूर्खता हो । हामी यति धेरै अबुझ नबनौँ । कमसेकम आफूलाई सङ्क्रमण भयो भने अरूलाई नसरोस् भनेर सहयोग गरौँ । यो सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो । रोग लागेर पछुताउनुभन्दा रोग लाग्नै नदिने उपाय अपनाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पनि हो ।
सारा संसारलाई एउटै नियमको घेरामा रोखेर बाँध्ने सानो विषाणुका विषयमा चिन्तन गरेर जीवन पनि पढौँ । यसले संसारलाई फुर्सदको रहस्यलाई बताउँदैछ । शहरिया भिडभाड छोडेर मानिसलाई आफ्नै प्रकृतिको रम्यता सिकाउँदै छ । कोलाहल र अशान्तिको ज्वालाबाट अलिकति कोल्टिएर सभ्यता र सुरम्यतामा स्वस्थतालाई अपनाउन सिकाउँदै छ । आफैंमा यो भाइरस सधैँ जीवित रहिरहँदैन भने अरूमा परजीवी हुने एउटा विषाणु एकजनाबाट सयौँसम्म, सयौँबाट हजारौँसम्म हुँदै आज संसारभर जहाज चढेर, गाडी चढेर रगरग बन्दै प्रलय मच्चाइरहेको छ । तब मानिसलाई फुर्सदिलो एउटै नियमको दायरा बनाएर आफू आफैं सचेत हुने र स्वतन्त्रताको आभास हुने वास्तविक प्रकृतिलाई सिकाउँदै छ । अलिकति संसारको प्रदूषणको वितण्डामा स्वस्थता प्रदान गर्ने अभिष्ट प्रकृतिको हुँदो हो । आणविक बमदेखि विज्ञानको आविष्कारका दम्भ गरिरहँदा सायद प्रकृतिभन्दा मानिस ठूलो हुँदैन भन्ने सन्देश प्रदान गरिरहेको हुँदो हो । अर्थात्, मानिसलाई फुर्सदको अर्थलाई प्रकृतिसँग गाँसेर हेर्नलाई भनेको हुँदो हो ।
(लेखक समसामयिक सन्दर्भका साथै भाषा र साहित्यका विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।)
कोरोना महामारी, फुर्सद र जीवनको एक अन्तर्य
Prevदश अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नौ सय यात्रु नेपाल फर्किए
भाडा छुट दिन घरधनीसँग इक्यानको अपिल, कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई अतिप्रभावित सूचीमा राख्न मागNext